कहाँबाट छिर्छ पटका ? - Mero Mechinagar
गृह मुख्य समाचारकहाँबाट छिर्छ पटका ?
कहाँबाट छिर्छ पटका ?
झापा | झापा प्रहरीले असोज २३ गते भद्रपुर नगरपालिका —३ बाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पटाका बरामद गर्यो । लगत्तै भोली पल्ट वा असोज २४ गते गौरादह— ९ बाट २५ हजार मूल्य बराबरको पटाका प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
विशेषगरी, दिपावालीमा मनोरञ्जनकारुपमा पडकाईने यस्ता वस्तुको आयात रोक्न प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि भित्रिने क्रम रोकिएको छैन् । भारतीय बजारबाट चाडपर्वलाई लक्षित गरि नेपालीले यस्ता वस्तु ल्याए पनि प्रहरीले बरामद गरेर नष्ट गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको अभिलेख हेर्ने हो भने २७ दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट १३ लाख रुपैयाँ मुल्यभन्दा बढीका पटका प्रहरीले वरामद गरेको छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार गएको असोज २३ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पटाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको टोलीले बरामद गरेको छ ।
गएको कात्तिक ३ गते गौरीगञ्ज —३ बाट ५५ हजार मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिएको थियो, भने कात्तिक ८ गते भद्रपुर —४ बाट ५५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
१३ कात्तिकमा कचनकवल— ४ बाट १ लाख मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिएको राम्रोसँग चौबीस घण्टा वित्न नपाउदैं मेचीनगर— १५ बाट १० हजार मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिएको थियो । यसअघि मेचीनगर — ५ बाट २ लाख र कात्तिक १८ गते मेचीनगर —१० बाट ३ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको पटका मूल्य बराबरको पटाका नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । कात्तिक १५ गते कचनकवल—४ बाट ५ हजार मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
कात्तिक १९ गते बुधबार अर्जुनधारा —५ बाट १ लाख र भारतबाट अवैध रुपमा नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेको तथा लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले बुधबार तीन लाख मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरेको छ । बुधबार दिउँसो झापाको भद्रपुर —५ मा लुकाई राखेको अवस्थामा वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सो पटाका बरामद गरेको हो । पटकाकै कारण धनजनको क्षति हुने भएकाले यसबाट निम्तिने दुघर्टनालाई रोक्न पनि यस्ता वस्तुको आयातमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाए पनि छिर्ने क्रम रोकिएको छैन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले कुनै पनि हालतमा जिल्लामा पटाका भित्रिन नदिने दावी गरिरहदाँ यत्रो परिमाणको पटका कसरी भित्रियो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
अघिल्लो लेखमापक्की पुल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासीमा खुशी पलायो, पुल निर्माण सँगै सदरमुकाम जाने बाटो छोटो भयो
अर्को लेखमाधुलावारीमा होईन धाइजनमै कोभिड अस्पताल बनाउन कार्यदलको सिफारिस